Recipe yaseCanada Pie
I-dessert yaseCanada yaseCanada I-pie ethakazelisayo ene-crusty crust and sweet stuffing. Mhlawumbi, kumntu uya kubonakala ashukela kakhulu kwaye athambile kakhulu. Ekuzaliseni isithelo esisikiweyo seepayi, esasifaka kwi-cognac. Iphunga lesiraphu le-maple lizalisa i-taste of fruit dried. Andizange ndinayo i-asidi eyaneleyo kwintetho yam. Mhlawumbi, ukuba unqwenela, kufuneka udibanise i-lemon juice kunye ne-zest. Iresiphi ezithakazelisayo zefutshane. Ithenda kwaye ithathaka. Nangona kunjalo, ngenxa yesola efunekayo ifomu elisezantsi, kwaye libhetele ngakumbi. Ngaphandle, ikhekhe ibonakala ihle kakhulu. Iqabunga lemephu lingatshintshwa nayiphi na enye isicelo.
Ukhula, ingqolowa 300 g
I powder sugar 70 g
Ityuwa 5 g
Ibhotela 180 g
Abavini abamnyama 200g
Iibhilikri ezomileyo 20 g
I-Cranberry yomile 30 g
Ibhota 40 g
Ubuninzi bokufakelwa kweeju 70 g
Isiraphu yeSiraphu 100 ml
Iviniga ye-Apple 5 ml
Ityuwa 10 g
Amaqanda inkukhu 1 pc.
Inyathelo 1 Ukwenza ikhekhe, kufuneka uthathe umgubo, i-yolk, i-bhotile, i-powder powder, ityuwa. Ukuzaliswa: iireki, ama-apricot omisiwe, i-scunberry, i-cranberries, i-cognac, ubusi bemibala, i-maple isiraphu, i-vanillin, i-aple cider iviniga, ityuwa, iqanda. Kucetyiswa ukuba uthathe isimo esisezantsi.
Inyathelo 2 Qala ngokuzaliswa. Izithelo ezomileyo ukuhlamba. Phala amanzi, ulethe kwi-thumba. Ukudibanisa amanzi. Iziqhamo ziyacima.
Inyathelo 3 Yinqumle ama-apricots omisiwe uze utyhelele zibe ziincinci. Gcwalisa iziqhamo nge-cognac. Vala ifilimu yokutya, uyibeke kwiiyure eziyi-1.5 kwifriji. Oku kungenziwa ngosuku ngaphambi kokubhaka.
Isinyathelo 4 Phakamisa umgubo kunye noshukela oluyimpuphu. Yongeza ityuwa. Gcina.
Inyathelo lesi-5 Yinqumle ibhotela ibe yiqhekeza. Faka efrijini iminyaka engama-30.
Inyathelo 6 Kwiprojekthi yokutya idibanisa izithako kwiingxenye kwi "pulsation" mode. Umxube omncinci owomileyo, ioli elincinci, enye ngeyodwa ukuqhuba ngeevili ezimbini. Yongeza kwakhona kwi-odda efanayo, u-whisking kwimodi efanayo.
Inyathelo 7 Susa inhlama, uyixoxe ngezandla uze wenze ibhola. Inhlama iphendulela kakhulu kwaye i-elastic. Beka kwifriji ngeyure eli-1.
Isinyathelo 8 Thatha intlama, uyifudumele ngezandla zakho, uchukumise ngokukhawuleza. Kwiphepha lesikhumba, phunqa inhlama enobubanzi obuncinane be-3.5 mm. Sika inhlama kwisangqa 2 cm ububanzi ngaphezu kwesitya sokupheka.
Isinyathelo 9 Lungisa ifom ngeoli, ufake iphepha lesikhumba phantsi. Ukutshintshela ngenyameko inhlama ibe yingqungquthela ngokusebenzisa iphepha elihlala kulo (phenduka kunye nephepha uze uyibeke ngobunobumba). Ukuqhuma intlama emzantsi. Beka inhlama kwifriji imizuzu engama-30.
Isinyathelo 10 Ukususela kwiintshonalanga zenhlama yenza umhlobiso we-pie - iqabunga le-maple. Faka kwakhona efrijini.
Inyathelo 11 Okwangoku, lungiselela ukuzaliswa. Hlanganisa izithako: ibhotela epholileyo, ushukela, uju, isiraphu ye-maple, i-vanillin, i-aple cider iviniga, ityuwa.
Inyathelo 12 Hlanganisa iqanda elibetywe kwi-mass. Phinda udibanise yonke into.
Inyathelo 13 Gcoba i-cognac kwisiqhamo sesityalo. Yisa i siqhamo. Yongeza kwi-sweet stuffing. Ukuxuba.
Inyathelo 14 Ngenhlama yokugubungela i-foil ngecala elincincileyo kwintlama. Gubungela iimbotyi ukuze inhlama ingavuki. Bhaka kwi-180 ° C ngaphambi kwemizuzu eyi-15.
Inyathelo 15 Susa ngokucophelela i-foil kunye neembotyi. Phinda ubeke ikhekhe ukubhaka ukubamba imizuzu eyi-10 de kube yimpundu yegolide. Yinyani. Nangona ikhekhe ipholisa, bhaka i-fox-leaf decoration.
Inyathelo 16 Faka ukuzaliswa kwikhekhe. Bhaka kwi-180 ° C malunga nemizuzu engama-20-25.
Inyathelo 17 Thatha ikhekhe. Yinyani.
Inyathelo 18 Qaphela ngokucophelela ikhekhe kwi-mold. Ukuhlobisa ngeqabunga lombala. Khonze i-dessert yeeyi okanye ikhofi.
Iipancakes kunye ne-cottage cheese kunye namaqhekeza
I dessert ye-Vanilla
Iibhasikiti kunye ne-millet porridge
Yiyiphi i-pizza eyona nto isondlo
I-kroti enqabileyo kunye nesaladi yepenanut
Iintlobo zeMfashini yamaTyhini ngo-2011
Iipancakes kunye ne-sausage, iindlela zokupheka ezithakazelisayo kunye neefestile kunye neefoto
Iipakiki eziphambili kunye neyokuqala kunye neeshizi, zokupheka kunye neefoto
Ngaba mnandi ukupheka i-pancake nge yogurt, iipespe zokupheka kunye nesithombe
Isaladi kunye namaqanda aqingqiweyo
Indlela yokuguqula ikati ukukhangela ifenitshala?